Nin Guursaday Gabar 11-Jir Ah Oo La Ganaaxay +SAWIRRO+VIDEO | Wardoon Wardoon.net - Somali News
Nin Guursaday Gabar 11-Jir Ah Oo La Ganaaxay +SAWIRRO+VIDEO
Nin u dhashay dalka Malaysia ayaa la soo tagaay Maxkamada Shareecadda Islaamka, kadib, markii lagu soo oogay inuu gabar 11-jir ah guursaday.
Ninkaasi oo magaciisa lagu sheegay Shi C/kariim Shi C/xaamid waxa uu qirtay inuu guursaday gabadhaasi yar oo u dhalatay dalka Thailand.
Maxkamaddu waxay Kiiskaasi u cuskatay qoddobadda 19 iyo 124 ee Sharciga Qoyska Islaamka Malaysia
Garsoore Maxamed Sorbiyaani Xuseen waxa uu Ninkii la soo eedeeyey lagu xukumay xabsi 6 bilood iyo ganaax lacageed oo dhan 1,500 00 Giniga Malaysia, una dhiganta 450 Dollarka Maraykanka.
Wargeyska Harian Metro oo ka soo baxa dalka Malaysia oo aan dhacdadan ka soo xiganay waxa uu qoray in Ninka guursaday gabadha yar uu ahaa 2 Xaasle aabe u ah 6 carruur ah.
Dhinaca kale, Ninkaasi ayaa la sheegay inuu Gabadhaasi bishii hore ee June ku guursaday Masjid ku yaalla Koonfurta dalka Thailand oo ay ku nool yihiin Mujtamac Muslimiin looga tiro badan yahay dalkaasi.
Kiiskan waxaa la furay, kadib, markii ay Xaaska labaad ee Ninkaasi dacwad isaga ka dhan ah u gudbisay Maxkamadda. Balse, ninkeeda waxa uu sheegay inuu Guurkaasi sax yahay, maadaama ay gabadha Waalidkeeda isugu barakeeyeen.
Wareysi uu siiyey Telefishin waxa uu ku sheegay inuu codsan doono Shahaadada Guurka caadiga, marka ay Xaaskiisa da’da yar gaarto 16-jir.
Baarayaasha Boliska Malaysia waxay sheegeen inay gabadha hooyadeeda codsatay inuusan guurka dhamaystir noqon karin ilaa ay gabadha ka gaarayso 16-jir.
Waxayna ku heshiiyeen inay guriga waalidkeeda sii joogto ilaa ay da’deda ka buuxsamayso 16-jir.
Ku-xigeenka Ra’isul-wasaaraha Malaysia, Wan Azizah Wan Ismail waxay sheegtay inay baarayaan haddii ay gabahdha Waalidkeeda u fasaxeen Ninkaasi inuu guursan karo gabadha yar, sababo la xiriira xaalladda dhaqaale ee qoyskaasi oo aad u liidato.
Qareen u dhashay Malaysia oo lagu magacaabo Syahredzan Johan waxa uu soo Tweet-gareeyey in Guurka ilmaha yar waajib tahay inuu Dembi noqdo.
Dalka Malaysia, gabdhaha Muslimiinta ee da’dooda ka hooseyso 16-jir ah waxa uu ansax noqon karaa marka ay Waalidkooda oggolaadaan.